Multichannel E-commerce Maitiro Ekuchinja Nguva Yezororo | Martech Zone
Pfungwa yeChishanu Chishanu neCyber ​​Muvhuro sezuva rimwechete rekutsvaga rakashanduka gore rino, sezvo vatengesi vakuru vakashambadzira Nhema Chishanu neCyber ​​Muvhuro zvinoshanda mukati memwedzi wese waMbudzi. Nekuda kweizvozvo, zvave zvishoma nezve kumanikidza one-off, zuva rimwe chete chibvumirano mubhokisi rebhokisi rakatowanda, uye zvimwe pamusoro pekuvaka zano rezvenguva refu uye hukama nevatengi munguva yese yezororo, uchiwana mikana chaiyo yeecommerce pa inguva dzakakodzera uchishandisa kunongedza online online chiteshi.
Iri zvakare igore rakasarudzika munzira iyo iyo coronavirus iri kukanganisa zvinyorwa mukati mebhodhi. Nekuda kwekumisa kwekumisa uye kunonoka, kuchave nekushomeka kwezvakawanda kupfuura zvegore zvoga-zvinoda zvekutambisa. Saka zvine hungwaru kugona kunzwisisa zvinodiwa nevatengi uye madingindira pamwe nekutaurisa zvine hungwaru dzimwe nzira kana zvigadziriso (nekutumira chaiyo-nguva, kudzoka muzviziviso zvestoko, semuenzaniso) ichave yakakosha kushandura kufarira mutengi mukutenga.
COVID-19 chave chiri chikonzero chekuchinja kukuru kune zvekutengesa pamhepo nguva ino yezororo.
Paive ne45% YoY kusvetuka muQ2 yekutengesa pamhepo uye isu tinofanirwa kutarisira kuona kuwedzera kwakafanana muQ3 neQ4 sevatengi vari vaviri vakasununguka kutenga online uye vanomanikidzwa nekuda kwezvirango zvechitoro mumuviri munzvimbo zhinji dzenyika.
Amazon Prime Day muna Gumiguru yakatungamirawo kumhanyisa kwevakwikwidzi vanopa kutanga kweChishanu Chishanu gore rino, ichigadzira hwindo rekutenga rakareba kupfuura vhiki rinorema rekutenga.
Zvinopfuura makumi maviri neshanu muzana ezvese zvekutengesa zvichaitika online ne25 uye Forrester inofungidzira kutengesa kwese kwekutengesa kuchadonha 2024% gore rino.
Kutora pfungwa inotungamirwa nedata kwakakosha kune vese vashambadzi vanotarisa kucheka neruzha mukati memwaka wakabatikana. Nemabhizimusi madiki ari kukwikwidzana nevatengesi vakuru kuitira vatengi kutariswa nekutengesa, zvitoro zvinofanirwa kuvimba nehunyanzvi uye hunhu kuti vafunge kunze kwebhokisi chirevo kuti zvimire kubva muboka revanhu.
Multichannel Kushambadzira kwakakosha kune Vatengi Engagement
Multichannel Kushambadzira kuve neyakaenzana kuvapo kwako vatengi mune dzakawanda nzira, senge webhu, nhare, zvemagariro uye mameseji. Kubatsira kukuru ndekwekuti mutengi wako (mutengi kana mushanyi) anogona kusangana nechako chiratidzo kuburikidza nesarudzo yavo yemakero akasiyana, uye anogona kuve neyakaenderana, isina musono ruzivo neako brand zvisinei nezvavanofarira nzira. Multichannel kushambadzira kwakakosha mune inowedzera kupatsanurwa tsika dzekushandisa dzemutengi wanhasi, avo vauya kuzotarisira zvakajairwa, zvakanangwa kushambadzira.
Mabhizinesi akakwenenzverwa zvakanyanya ndeawo akavhurika kuti achinjike kune inoshanduka nharaunda, kunyanya gore rino zvakapihwa denda. Iwo mabhizinesi anogamuchira dandemutande, nhare, uye zvemagariro uye anotora mukana weakasiyana mameseji chiteshi senge email, Push, uye sms ichave nechokwadi kuti varipo munzvimbo yega yega mutengi anenge achida kuita.
Multichannel haisi chete mushandirapamwe, iri zano repakati. Nhanho yekutanga ndeyekunzwisisa uko vatengi vako varipo varikuita, wobva waisa pekutanga kugadzira chiitiko chinowirirana kune wese mushanyi pane imwe neimwe yeaya makwara. Tanga newebsite inoteerera, uchifunga kuti yakagadziridzwa kuti igone kuwanikwa paPC, Nharembozha neTablet browser vashanyi. Wobva wawedzera nzira dzekutanga dzekuita pamwe nezviitiko zvakafanana pasocial media kwaunosvika uye nhare dzako dzese dzemeseji. Izvi zvinofanirwa kuve zvinosanganisira zveSMS, Push uye email, uye shandira kuzviitira wega nezvinodiwa nevatengi vese.
Semuenzaniso wekushambadzira kwema multichannel unoshanda, tinogona kutarisa kuWarbyParker: vane mutengi anotarisisa mutengi, vakavaka ruzivo rwevatengi rwepanyama uye nedhijitari. Ivo vanoshandisa kusundira notices kuti vabatanidze vanoshanda vatengi, maSMS ekugadzwa uye kuitazve zvakare vashandisi vakasarudza kubva kune dzimwe chiteshi, uye vanoshandisa email yekutengeserana mameseji semarisiti. Ivo vanotoshandisa chaiyo yakananga tsamba yekumeso kuratidza masitaera matsva. Imwe neimwe yevatengi inobata poindi meseji inowirirana yekupa kwavo, ine chiteshi yakanyatsogadzirirwa kune chinangwa chekutumira mameseji.
Multichannel Kushambadzira Akanaka Maitiro
Heano mamwe maitiro akanakisa anosvika kune vashandisi vako uye kuwedzera vatengi vezororo vachishandisa nzira yekutaurirana yakawanda
Nzwisisa uko vatengi vako vari kushanda uye isa mari mune izvo zviteshi. Unogona kungosarudza chaiyo chiteshi, nekuti multichannel haifanirwe kureva chiteshi chega chega. Sarudza izvo zvinoita zvine musoro zvakanyanya kune ako bhizinesi zvinangwa, chako chigadzirwa, uye zvakanyanya kukosha, mutengi wako.
Simbisa kusachinja-chinja. Gadzirisa zvese zvechiteshi, asi chengetedza kusagadzikana kwechiratidzo uye mameseji pane ese iwo
Tora kodzero yako yekutengesa pane chiteshi chega chega: Opt-ins uye kusaina kumusoro zvinogona kukurumidza uye vashandisi vanogona kukurumidza kudzora iyo yakaoma-kuhwina kuwana. Ita shuwa yekutevera kuburikidza nevimbiso yako yekupa chaiyo mushandisi kukosha pane yega chiteshi. Funga nezve iyo 1: 4 yemagariro midhiya mutemo: kune yega 1 yekuzvisimudzira ziviso, ita shuwa kuti watumira ina-mushandisi-yakanangana mameseji ane chaiyo vatengi kukosha.
Chikamu, chidimbu, chidimbu. Batch uye blast chinhu chekare, uye vatengi vakurumidza kuuya kutarisira inoenderana uye yakasarudzika mameseji pane yega chiteshi. Ipa vashandisi sarudzo yekusarudza izvo zvemukati zvavanogamuchira pane izvo zviteshi. Shandisa yavo chiitiko uye chero ehunhu dhata iwe yaunofanirwa kuita ako mameseji zvakanyanya sezvinobvira, uku uchibvisa zvisina basa mameseji.
Gadzira Urgency neiyo Nguva-Inonzwisisika Kukwidziridzwa Semuenzaniso, Mhanya inonakidza "dhizaini yeawa" kukurudzira, kugadzira zvakatonyanya kukurumidza nekupa imwe yekuwedzera dhisikaini pamusoro pemutengo wakatarwa wekutengesa, uye shandisa izvi seforamu yekuwedzera kusarudza-mukati mevatengi runyorwa rwePush & SMS. Shopify Uyezve mutengesi, InspireUplift yakaona 182% kuwedzera mune mari ne leadingaging Push notices mune yavo vatengi kubatanidzwa zano.
Ita kuti mameseji ako aonekwe akapfuma. Vaka kushamwaridzana kupfupi asi kunokanganisa mukati memessage yako. PaChishanu Chishanu, zviyeuchidzo zvakapfuma zvinogona kuzivisa vashandisi veanouya madhiri mazuva mashoma zuva guru risati rasvika. Iwe unogona kunyange kugadzira kuverenga pasi kusvikira Chishanu Chishanu chatanga. Zvino, kana iko kushevedzera kwatanga, unogona kushandisa mameseji akapfuma kuyeuchidza vashandisi kuti inguva yakawanda sei yasara kusvika kumagumo kweChishanu Chishanu (kana chero nguva dhiri rako parinopera).
Gadzirira Mberi Uchishandisa A / B Kuedza. Kuongorora kweA / B kunogona kuva chishandiso chakakosha kwazvo mudura rako, kuyedza shanduro mbiri dzemeseji yako dzichipesana kune vamwe nevateereri vakafanana, uye nekuona mhedzisiro. Shandisa chiitiko chekutevera kuti uone kuti nderipi meseji rinotyaira mhedzisiro yaunoda (kunze kwekungobaya chete), wozoishandisa kuti ukure mushandirapamwe kune vateereri vako vakawanda.
Hapana mubvunzo kuti iri igore risingazivikanwe reCommerce, asi nekugadzirisa uye kunamatira kune akanakisa maitiro uye meseji chaiyo uye mabatwo evatengi nevatengi vako, zvigadzirwa zvinogona kutyaira mari zvinobudirira kumira kunze kwevanhu.
Tags: 2020Kuongorora A / Bmusi wezuvabrand kusagadzikanabrowser Noticese-zvokutengeseranaecommercelockdownmultichannelmultichannel kushambadziramultichannel kushambadzira zanozvoseignalzvikamuShopify Uyezveinotora nguva
Josh Wetzel ndiye Chief Revenue Officer weOneSignal, mutungamiri wemusika mukushambadzira kwevatengi, kupa simba mafoni kusunda, webhu Push, email ne-in-app mameseji emakambani anopfuura mazana masere. Ane makore gumi nemaviri basa rekuvaka dhijitari commerce uye software mabhizinesi, aine hutungamiriri stints ku eBay, PubMatic neBazaarvoice.